MOCA Factory | China MOCA Manufacturers, Suppliers
2022 Ozinina fahatongavana vaovao mivantana fivarotana kafe mini robot kiosk
Mini robot kafe kiosk, MOCA Mini-series dia natao manokana ho an'ny sehatra fampiharana anatiny toy ny fivarotam-boky, campus, trano famakiam-boky, trano birao, toeram-pivarotana sy ny sisa. Ny dingana rehetra amin'ny fanaovana kafe dia miasa amin'ny alàlan'ny sandry robot miara-miasa ho azy miaraka amin'ny famantarana mazava amin'ny fotoana tena izy, mampiseho ny fizotran'ny fanaovana kafe ankehitriny. Misy fanamafisana telo lehibe amin'ny andiany MOCA Mini. Izy ireo dia MOCA Mini (iraisam-pirenena), MOCA Mini-ice (iraisam-pirenena) ary MOCA Mini-barotra (iraisam-pirenena). Izy rehetra ireo dia natao ho an'ny fampiharana iraisam-pirenena miaraka amin'ny rafitra fandidiana anglisy sy antontan-taratasy fanohanana. Ankoatr'izay dia manana endri-javatra manokana ihany koa izy io, dia ny asa fanontam-pirinty kafe.
Kiosk kafe robot barista misy kafe mitete
Robot barista kiosk kafe misy kafe mitete MCF031A dia natao ho an'ny toe-javatra fampiharana anatiny toy ny toeram-pivarotana, trano birao, seranam-piaramanidina sy ny toerana hafa amin'ny toerana malalaka anatiny sy malalaka fahitana, manompo ny mpanjifa amin'ny zava-pisotro misy tsirony kafe vita amin'ny semi-automatique milina kafe sy vilany sivana mitete. Ny dingana rehetra amin'ny fanaovana kafe dia mandeha ho azy amin'ny alàlan'ny fitaovam-piadiana robot miara-miasa mifanaraka amin'ny baiko apetraka amin'ny Internet na eo an-toerana ataon'ny mpanjifa. Afaka maka tahaka ny barista tena izy io mba hanaovana zava-pisotro kafe isan-karazany amin'ny alàlan'ny dingana fanaovana kafe roa samy hafa.
Kiosk kafe Barista vaovao namboarina
Robot barista kafe kiosk MCF021A dia natao ho an'ny toe-javatra fampiharana anatiny toy ny toeram-pivarotana lehibe, trano birao, seranam-piaramanidina sy ny toerana hafa amin'ny malalaka efitra anatiny sy malalaka fahitana, manompo ny mpanjifa amin'ny tsirony zava-pisotro kafe vita amin'ny semi-automatique milina kafe. Ny dingana rehetra amin'ny fanaovana kafe dia mandeha ho azy amin'ny alàlan'ny sandry robot miara-miasa mifanaraka amin'ny baiko apetraka amin'ny Internet na eo an-toerana ataon'ny mpanjifa. Afaka mahafeno ny tsiron'ny mpanjifa isan-karazany izy io ary afaka manamboatra kafe mifototra amin'ny ronono miaraka amin'ny ronono omby sy voanio.
Robot barista misy toeram-piasana
Robot barista mipetaka amin'ny toeram-piasana MCF041A dia natao ho an'ny toe-javatra fampiharana fivarotana kafe ho toy ny milina kanto latte, manompo ny mpanjifa amin'ny kafe mahazatra sy kafe kanto latte izay saika mitovy amin'ny tena barista. Ny dingana rehetra amin'ny fanaovana kafe dia mandeha ho azy amin'ny alàlan'ny sandry robot miara-miasa. Ny baiko dia novokarin'ny mpandraharaha. Ny hetsika voalohany ataon'ny mpandraharaha dia maka kaopy tsy misy na inona na inona ary mametraka izany eo amin'ny toerana fiaingana. Avy eo indray kitihina vao manomboka manamboatra kafe.